विराटले पिउने युरोपका हिमालको पानीको मुल्य सुन्दा चकित, सगरमाथाबाट यसैगरे देश कहाँ पुग्थ्यो ! – Khabaarpati
December 2, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on विराटले पिउने युरोपका हिमालको पानीको मुल्य सुन्दा चकित, सगरमाथाबाट यसैगरे देश कहाँ पुग्थ्यो !
काठमाडौं । तपाईंले आजसम्म एक लिटर पानीका लागि कति रुपैयाँसम्म तिर्नु भएको छ ? धेरै भए १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुभएको होला, नत्र नेपालमा सामान्यतया ३० रुपैयाँमा एक बोत्तल पानी पाउँन गाह्रो हुदैन । तर नेपालमा पनि विदेशबाट आएको पानी पिउने व्यक्तिहरु रहेका छन् । जापानलगायत विभिन्न मुलुकबाट केही खास व्यक्तिहरुका लागि विशेष पानी आयात हुने गरेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
तर विराटले यस्तो उत्कृष्ट फिटनेसको लागि धेरै कुरा त्याग गर्नु परेको छ । केही वर्ष अघि उनले भेगन हुने निर्णय गरेका थिए । भेगनहरू ती व्यक्ति हुन् जसले शाहकारी खानाका साथै दूधबाट बनेका उत्पादनहरू पनि खाँदैनन् । विराटको निर्णयपछि सबैले उनलाई स्टमिना बनाउन सक्नेछैनन् भन्ने अनुमान लगाएका थिए । तर विराट यस भ्रमलाई तोडेर विश्वको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बन्न सफल भएका छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यसरी नै नेपालको सगरमाथाबाट शतप्रतिशत प्राकृतिक पानी बनाएर बेच्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्थ्यो । कसैले सोचेको छ ? हामी पानी बेचेर विश्वको सम्पन्न देश बनाउन सक्ने थियौँ । किनकी युरोपको हिमाल भन्दापनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको महत्व अवश्यपनि धेरै छ । यसबाट आउँने पानीपनि शतप्रतिशत प्राकृतीक अवश्य बनाउँन सकिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
आफ्नो नाम नै परिवर्तन गरेर बलिउडमा चर्चा कमाएका चर्चित कलाकार